La-qiimeyn karo oo adag Qalabka Korjoogteynta SEO
Monday, June 4, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Waxaan isha ku haynay SERPS.com in muddo ah hadda. Aasaasihii Scott Krager wuxuu na tusay noocyadii bilowga ahaa waana runtii la dhacnay. Waxaan isticmaalnay qaybteenii Qalabka kormeerka SEO ka hor. Si kastaba ha noqotee, SEO wuxuu sii wadaa inuu isbeddelo… Iyo qalab badan oo aan wali la hayn.
Kooxda Scott ayaa qaadatay isbedelka runtiina waxay la yimaadeen nidaam aad uga duwan… awood u leh inay si toos ah ula falgalaan Google Analytics, la soco tilmaamayaasha bulshada, cabbiro xaaladaha imtixaanka - dhammaantood waa la awoodi karaa iyada oo loo marayo interface user interface. Kani maahan barnaamij bilow ah, in kastoo… SERPs ay kuu oggolaanayaan inaad si caalami ah u tijaabiso sidoo kale gudaha waddanka 65!
Scott wuxuu farta ku fiiqay afartaan kala-duwanayaasha muhiimka ah barxadda:
Our Imtixaanada SEO muuqaalka ayaa runtii nadiif ah. 3 guji oo waad dejin kartaa imtixaanka isku xirnaanta SEO si aad u aragto waxa shaqeynaya iyo waxa aan ku jirin booskaaga.
Qiimaynta ereyada maalinlaha ah ee muhiimka ah si adag ayaan ula qabsanaynaa Google Analytics sidaa darteed waxaad ku arki kartaa jaleeco waxa midhaha hooseeya ee adiga kuu ah maalin kasta oo aad tahay.
Dashboard ayaa kuu oggolaanaya si deg deg ah ugu wareeji goobaha oo baaritaan caafimaad oo aasaasi ah ku samee goob kasta. Wanaagsan haddii aad maamusho goobo badan.
Our aragtida heerka bogga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si fudud u aragto isku xirnaanta udhaxeysa darajooyinka, taraafikada, iyo jaangooyooyinka bulshada jaantus aan indhahaaga dhiig ka dhigin.
Waa kuwan qarsoodi ah SERP-yada soo socda ee qaababka dashboardka kormeerka SEO iyo shaqeynta:
In kasta oo dalabyada badan ee halkaa ka jiraa ay ku baxaan boqolaal ama kumanaan bishiiba, SERPs wuxuu bilaabmaa $ 9 bishiibaQiimo uu suuq kasta awoodo (oo ay tahay inuu ka faa'iideysto). Xirmadooda ugu weyn waxay kuu oggolaaneysaa inaad la socoto 1,000 eray-eray-bixinno guud ahaan 5,000 bog oo ah $ 98 bishiiba… ma xuma. Bilow adiga 14 maalin maxkamadayn ah!
Tags: Analytics googleSEOkormeerka seomadal seoimtixaanka seoqalabka seoqalabka seoserps
Jun 6, 2012 saacadu markay ahayd 4:54 AM
Yaa saaxiibayaal kani waa run in Google Analytics uu runtii yahay aalad seo wanaagsan iyo aalad Webmaster sidoo kale